Ukuqasha: Iphasiwedi Conundrum kanye ne-Experience Yomsebenzisi | Martech Zone
Lwesibili, Disemba 9, 2014 ULwesibili, May 2, 2017 Douglas Karr
Mhlawumbe isinqumo esihle kunazo zonke engisithathe kulo nyaka ngokukhiqiza nokuphepha kwami ​​besikubhalisela Dashlane. Angiwagcini wonke amaphasiwedi wami weselula, ideskithophu newebhu kusistimu yawo ephephile, ebethelwe. Iqiniso liwukuthi, angazi nokuthi yini amaphasiwedi ami manje njengoba ngisebenzisa Dashlane I-Chrome Plugin yokungena ngemvume ngewebhu, inguqulo yedeskithophu yezinhlelo zokusebenza, kanye nohlelo lokusebenza lweselula lokungena ngemvume kohlelo lokusebenza lweselula.
UDashlane unezici ezimbalwa ezingeziwe engizithandayo. Okokuqala, ngingabelana ngamaphasiwedi nabasebenzisi abagunyaziwe - kuhle kumphathi wami wehhovisi, i-accountant, umphathi wephrojekthi, nabathuthukisi. Ngingabanikeza ukufinyelela okugcwele ukuze babone iphasiwedi noma amalungelo anqunyelwe ukumane bayisebenzise. Futhi banikeza oxhumana naye ophuthumayo engingamsetha. Uma, nganoma yisiphi isizathu, ngikwazi ukunikeza umuntu imvume ohlwini lwami oluphuthumayo - angacela ukufinyelela. Uma ngingaphenduli esikhathini esithile, bathola ukufinyelela ku- my Dashlane i-akhawunti.
Njengoba ngiyisebenzisa kumadivayisi wonkana, amanethiwekhi, namapulatifomu - ngithanda ukuba nendawo eyodwa emaphakathi kukho konke ukungena ngemvume kanye nomkhondo wokuhlola. Dashlane futhi ungitshela ukuthi yimaphi amaphasiwedi angenzakali ngokwanele futhi engibeka engcupheni. Manje senginama-password ahlukile, aqinile ahlukile kuzo zonke izinhlelo engingena kuzo. Ngakho-ke uma othile ethola elilodwa lamaphasiwedi wami, abatholi ukufinyelela kuyo yonke insizakalo. Futhi uma bezama ukungena ngemvume ku-Dashlane, kufanele ngigunyaze yonke idivayisi entsha ezama ukungena ngemvume.
Okungiletha enkingeni yami ngama-password. Dashlane yenze impilo yami yaba lula kayishumi kepha ezinye izinhlelo zokusebenza zenza impilo yami ibe nzima kayishumi. Ngikugula impela ukufaka iphasiwedi kumasekhondi ama-2 kungxenyekazi efanayo. Buyekeza uhlelo lokusebenza… kufanele ungene ngemvume. Landa ingoma… kufanele ufake iphasiwedi yakho. Shintsha izilungiselelo zokuphatha… kufanele ufake iphasiwedi yakho. Lokhu ngaphandle kokuthi Sengivele ngingene ngemvume kuseshini efanayo!
Musa ukubuza abantu ukuthi benze iphasiwedi eyindida, enzima engaqondakali kusikrini esisodwa… bese uqhubeka ubacela ukuthi bahambise iphasiwedi kuzo zonke izenzo ezilandelayo kulo lonke ulwazi lomsebenzisi! Ngamasistimu afana no-Dashlane, angisawabambi ngekhanda amaphasiwedi wami, ngimane ngikopishe bese ngiyinamathisela. Lokhu kusho ukuthi kufanele ngingene ngemvume ku-Dashlane, ngikopishe iphasiwedi, ngivule uhlelo lokusebenza, ngithumele iphasiwedi, bese ngiqhubeka ngiyinamathisela kuzo zonke izicelo ezingemuva kwalokho.
Ngiyathanda ukuthi ezinye izinhlelo zokusebenza zeselula zithutheleka kumakhodi anezinombolo ezi-4 noma ukulandelana kokuswayipha kunokuba kungenze ngithumele yonke iphasiwedi enezinhlamvu ezingama-14, izinombolo, izimpawu, njll. Ngiyalithanda neqiniso lokuthi ngiyakwazi ukusebenzisa izigxivizo zeminwe yami kudivayisi ye-iOS ukugunyaza ngezinye izinhlelo zokusebenza (wonke umuntu kufanele abe nalokhu!).
Nikeza abantu abanephasiwedi evikeleke kakhulu inketho elula yokuthuthuka endaweni yesikhulumi. Angikhathali ukugcina isikhathi futhi ngidinga ne-password futhi, kepha uma ngisesicelo, kuyabheda impela.
Ukudalulwa: Uma ubhalisela i- Dashlane akhawunti nge Dashlane isixhumanisi ngenhla, ngithola izinyanga ze-6 ze Dashlane inkokhelo!
Tags: dashlaneiphasiwediisipiliyoni somsebenzisi
Awukho umhlahlandlela we-Hype ekudalweni kokuqukethwe